Fomba 13 hiatrehana ny fiainana miaraka amin'ireo rafozana - Fifandraisana
Fomba 13 hiatrehana ny fiainana miaraka amin'ireo rafozana
Ny mifindra miaraka amin'ny rafozanao dia tsy safidy voalohany velively. Saingy indraindray dia ilaina amin'ny karazana antony rehetra, na ara-bola, na amin'ny fampiharana na amin'ny toe-javatra iainana.
Ny fijanonana miaraka amin'ny rafozanao mandritra ny andro na herinandro vitsivitsy dia zavatra iray ary mety hanan-kery manokana. Fa raha ny marina VELONA miaraka amin'izy ireo mandritra ny fotoana maharitra, na vanim-potoana maharitra na tsy voafetra, dia hafa iray hafa.
Na tsara toy inona aza ny fifandraisanao amin'izy ireo dia mety ho sarotra ny miaina miaraka amin'ny rafozanao.
Angamba ianao efa nanana ny toeranao manokana niaraka tamin'ny namanao taloha, na angamba niara-nipetraka tamin'ny ray aman-dreniny ny namanao ary nisy dikany ho anao koa ny hifindranao.
Na izany na tsy izany dia mitady fomba hahamety kokoa ny fitantanan-javatra ianao.
Tsy misy torohevitra mitovy habe amin'ny rehetra. Tsy manam-paharoa ny toe-javatra misy anao ary ilaina ny mahatadidy izany.
Ny fanamby atrehanao rehefa miara-mipetraka amin'ny rafozanao ianao dia mety tsy hitovy amin'ny fanamby atrehin'ny mpivady hafa.
Hiankina amin'ny fifandraisanao amin'ny rafozanao sy ny fifandraisan'ny vadinao aminy izany.
Betsaka koa no hiankina amin'ny haben'ny tranony. Na eo an-tampon'ny tsirairay ianao na manana toerana hiparitahana. Na mizara efitra fandroana daholo ianareo na manana efitra misaraka.
Ary, mazava ho azy, betsaka ny miankina amin'ny fanaonao isan'andro. Na miasa izy ireo na efa misotro ronono, ary na ianao na ny vadinao miasa ao an-trano. Ohatrinona ny fotoana laninao amin'ny habaka mitovy, ary ny fahaizanao mahaleo tena mifanatrika.
Na inona na inona toe-javatra iainanao, ireo torohevitra ireo dia tokony ho afaka manampy anao.
Hojerentsika ny fomba ahafahanao manamaivana ireo fihenjanana eo amin'ny fifandraisanao, ny fomba ahafahanao misokona manokana ny fiainanao manokana sy ny fotoana irery, ary ny fahatsapanao ny ao an-trano, fa tsy toy ny vahiny vonjimaika fotsiny.
1. Ho tenanao.
Ny zavatra voalohany aloha, tsy misy antony manandrana mametraka eo aloha na mody hoe zavatra tsy ianao ianao. Tsy ho vitanao ny hitazona ny fihetsika lava, satria mety ho reraka izany.
Manàna fahalalam-pomba sy fiheverana, azo antoka, fa aza mahatsiaro tena ho mila famindrana toetra ianao mba hitiavan'ireo rafozanao anao.
Hamarino tsara fa marina amin'ny tenanao ianao hatramin'ny andro voalohany ka tsy mila mijoro amin'ny lanonana.
ny fomba hampijanonana ny lolompo amin'ny vadinao
2. Manaova resaka marina sy mialoha.
Raha tokony manantena fotsiny ianao fa hiara-hiaina voajanahary miaraka ary hamantatra izany daholo, dia tsara ny hipetraka eo am-piandohana ary hiresaka momba ny fomba hiasan'izy rehetra amin'ny sehatra azo ampiharina.
Ampahafantaro azy ireo fa tena ankafizinao ny zavatra ataon'izy ireo ho anao ary te-hiresaka ianao mba hampandeha tsara ny raharaha ny rehetra ary hisorohana ny tsy fifankahazoan-kevitra.
Tsara raha avelao ny olon-tianao hanao be resaka rehefa mipetraka ianao amin'ity dinika ity, fa mety tsy maintsy mandray anjara ianao.
Rehefa dinihina tokoa, ny sakaizanao dia mahalala ho azy hoe hanao ahoana ny fiainana miaraka amin'ny ray aman-dreniny ary inona no antenaina amin'izy ireo. Mety hieritreritra izy ireo fa ho miharihary aminao koa izany.
Fa zava-dehibe ny fifanakalozan-kevitra amin'ny antsipiriany rehetra mba hahafantaran'ny rehetra mazava ny fandaminana.
Mandoa hofan-trano ve ianao? Sa handray anjara amin'ny fomba hafa ianao? Volavolan-dalàna? Fiantsenana sakafo? Mahandro?
Amin'ny firy no afaka manomboka mitabataba ianao amin'ny maraina, ary oviana ianao no mila manaparitaka zavatra amin'ny hariva? Misy mila fandroana amin'ny fotoana voafaritra ve? Sa toerana hafa ao an-trano?
Misy fetra tsy voafetra ve? Ahoana no hiasan'ny fanadiovana?
Ny fanadiovana ireo zavatra ireo hatrany am-piandohana dia hanampy amin'ny fisorohana ny sasany amin'ireo teboka fanaintainana tsy azo ihodivirana izay avy amin'ny olona rehetra monina eo ambanin'ny tafo iray ihany.
3. Tsoahy ny lanjanao - ary andramo antoka fa hisintona ny lanjan'ilay namanao ianao.
Vantany vao nanao ireo fifanarahana ireo ianao dia alao antoka fa mifikitra aminy ianao. Raha milaza ianao fa hanao zavatra dia alao antoka fa nanao izany ianao.
Ary andramo ny famporisihana ny sakaizanao hanao koa ny anjarany. Mety halaim-panahy hivily any amin'ny maody ho an'ny zatovo izy ireo ary avelao ny ray aman-dreniny haka azy ireo ary hitantana ny ainy ho azy ireo, ka manaova izay azonao atao hisorohana izany.
Na farafaharatsiny mba ampahatsiahivo azy ireo fa rehefa miaina samirery ianareo roa dia tsy hanana olon-kafa hanao ny raharaha ho azy ireo intsony.
wwe tsy misy indrafo 2016 karatra
4. Fidio ny adinao.
Misy foana ny zavatra tsy mahazo aina rehefa miaina miaraka amin'ny rafozanao ianao, fa tsy maintsy manapa-kevitra ianao hoe inona no mendrika hanaovana tabataba sy izay tsy.
Matetika, mila miaina fofonaina lalina fotsiny ianao ary avelao izay rehetra alehany mba hisian'ny fiainana milamina.
Mitondrà ihany ny raharaha rehefa tena miahiahy momba azy ireo ianao na mieritreritra fa ataon'izy ireo tsy maharitra ilay toe-piainana.
5. Aza miala amin'ny adim-pianakaviana.
Raha mifamaly amin'ny ray aman-dreniny ny olon-tianao na misy karazana tohan-kevitra ara-pianakaviana hafa dia miezaha hijanona ho tsy miandany fa tsy miandany na maneho ny hevitrao momba ny toe-javatra.
Ny zavatra farany tadiavinao dia ny fiampangana anao ho manandrana manelanelana azy ireo, ary am-polony taona maro ny politikam-pianakaviana voarohirohy izay mety ho sarotra aminao ny hahatakatra.
6. Asehoy an-tsitrapo.
Manomeza fanampiana sy vonona ny hiala amin'ny lalanao ankehitriny ary averimberina hanampiana azy ireo, satria handresy teboka marobe ianao.
Mahandro sakafo hariva manokana na mividiana sakafo mahaliana fantatrao fa tian'izy ireo. Ampio izy ireo hivoaka amin'ny tetikasa na zavatra mahaliana azy ireo. Mandehana amin'ny kilaometatra fanampiny isaky ny afaka ianao.
Ireo karazan-javatra ireo dia afaka manosotra ny kodiaran'ny fifandraisana ary manampy azy hihazakazaka bebe kokoa.
7. Mandany fotoana miaraka amin'ny kalitao.
Aza misy amin'ny toerana mitovy amin'ny rafozanao fotsiny. Ny fiaraha-miaina dia mety hidika hoe mifankahita matetika ianao nefa tsy dia miresaka na mihomehy miaraka mihitsy ianao.
Hamarino tsara fa mandrindra fotoana misy kalitao miaraka amin'izy ireo ianao indraindray mba hahafahanao mankafy ny orinasan'ny tsirairay sy mifamatotra tsara.
Ny sakafo hariva mahafinaritra na ny fialantsasatra manokana dia tokony hanao fikafika.
8. Mizarà ny fomban-drazanao ary fantaro ny momba azy ireo.
Anontanio ny fomban-drazan'izy ireo ary mifalia amin'ny fandraisana anjara. Na izany ny fomba fankalazany ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana na fialantsasatra manokana toa ny Krismasy, na izay mariky ny kolontsainy. Midira amin'ny fankalazana amin'ny hafaliana.
Ary zarao amin'izy ireo koa ny fomba amam-panaon'ny fianakavianao. Raha samy hafa fiaviana ara-kolotsaina ianao dia zarao amin'izy ireo ny sakafo nentim-paharazana sy ny fankalazana ary avelao izy ireo hahafantatra anao bebe kokoa.
9. Alao antoka fa manana fotoana kalitao miaraka amin'ny mpiara-miasa aminao ianao.
Mbola zava-dehibe kokoa noho ny fotoana kalitao miaraka amin'ny rafozana aza, mazava ho azy, ny fotoana kalitao miaraka amin'ny vadinao.
Mety ho sarotra ny mandany fotoana miaraka amin'ny kalitao rehefa tsy nahazo ny toeranao manokana ianao. Koa alao antoka fa samy manana fotoana tsy tapaka ho anao roa fotsiny ianao rehefa ao an-trano na mivoaka sy mpivady.
Manaova ezaka manokana amin'ny daty ary asehoy amin'ny mpiara-miasa aminao ny maha-zava-dehibe ny fihazonana ny filaharan'ny fifandraisanao aminao.
10. Mivoaha miaraka amin'ireo namanao.
Ary alao antoka fa tsy hanao ambanin-javatra ny namanao sy ny fianakavianao koa ianao. Mivoaha tsy tapaka miaraka amin'ny namana na fianakaviana.
Izany dia hanampy amin'ny fanesorana ny tsindry ao an-trano ary hanome anao outlet raha misy zavatra manelingelina anao. Somary manana elanelam-pofonaina kely dia afaka mandeha lavitra amin'ny fanaovana fiainana an-trano sarotra tanterahina kokoa.
11. Ampahafantaro azy ireo foana.
Ny rafozam-bavinao dia tsy tokony hanantena anao hampahafantatra azy ireo ny hetsika rehetra ataonao na hody amin'ny fotoana iray. Olon-dehibe ianao ary tsy tokony hanandrana mifehy anao izy ireo.
Fa mila manaja kosa ianao. Raha te-hanasa olona iray ianao dia manontania raha tsy maninona izany. Raha mila lakozia na efitrano fandraisam-bahiny amin'ny zavatra manokana ianao dia omeo fampitandremana mialoha.
Raha miara-misakafo hariva ianao ary fantatrao fa tsy mody any an-trano ianao, na raha tsy afaka mankany amin'ny fivarotana rehefa nilaza fa mety, dia manaja ary ampahafantaro azy ireo haingana araka izay tratranao.
12. Aza ampidirina amin'ny tantara an-tsehatra izy ireo.
Ny mpivady rehetra dia miady hevitra ary manana ny olany, saingy zava-dehibe ny tsy anateranao ireo olana ireo eo alohan'ny rafozanao. Tazomy ho anao izany.
Miezaha tsy hifampikasoka eo alohan'izy ireo. Raha milaza zavatra mahasosotra anao ny namanao dia makà fofonaina lalina, mitsikia, ary resaho izany rehefa avy eo ianao irery miaraka amin'izy ireo.
Aza mitaraina momba ny olon-tianao amin'ny ray aman-dreniny na manandrana mitaona azy ireo hiaraka aminao. Ekeo fa na inona na inona tenenin'izy ireo dia ny zanakalahy na ny zanakavavinao ary tsy ho eo anilanao velively izy ireo.
13. Aza manao ny marina amin'ny vadinao.
Zava-dehibe tokoa ny mifampiresaka amin'ny namanao momba ny fahatsapanao satria mety tsy ho hitan'izy ireo ho azy izany.
Hitan'izy ireo fa mora kokoa ny miditra amin'ny fiainana amin'ny ray aman-dreniny noho ianao ary mety ho sahirana mahita ny zavatra amin'ny fomba fijerinao.
Noho izany, ampahafantaro azy ireo fa ny zavatra niainanao dia tsy mitovy amin'ny azy ireo.
Ny fitiavanao ny ray aman-dreniny ary tianao izy ireo, ary tena maniry ny hanao an'io asa io ianao, saingy mila ny fanohanan'izy ireo amin'ity toe-javatra ity ianao.
Miteraka fahasahiranana lehibe eo amin'ny fifandraisana ve ny fiainana miaraka amin'ny rafozanao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Raha misafidy ny fianakaviany aminao ny vadinao dia izao no hatao
9 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t hanampy anao mandritra ny fotoan-tsarotra amin'ny fifandraisanao
ahoana no hahalalana raha tsara tarehy na ratsy tarehy ianao
ahoana no ilazako amin'ny bandy tianao izy ireo
rehefa tsy tsapanao fa tiana amin'ny fiarahana
tononkalo fohy momba ny fiainana sy ny fitiavana
inona no holazaina amin'ny olona iray taorian'ny fisarahana